1 Samuel 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
16 N’ikpeazụ, Jehova gwara Samuel, sị: “Ruo ole mgbe ka ị ga na-eruru Sọl uju,+ ebe ọ bụ na mụ onwe m ajụwo ya ka ọ ghara ịbụkwa eze Izrel?+ Gbajuo mpi gị mmanụ+ gawa. M ga-edunye gị ka ị gakwuru Jesi+ onye Betlehem, n’ihi na esiwo m n’etiti ụmụ ya ndị ikom họtara onwe m eze.”+ 2 Ma Samuel sịrị: “Olee otú m ga-esi gaa? Ozugbo Sọl nụrụ ya, ọ ga-egbu m.”+ Jehova wee sị: “Si n’etiti ìgwè ehi kpụrụ otu nwa ehi, ị ga-asịkwa, ‘Abịara m ịchụrụ Jehova àjà.’+ 3 Kpọọkwa Jesi ka ọ bịa n’ebe ahụ a ga-achụ àjà; mụ onwe m ga-emekwa ka ị mara ihe ị ga-eme,+ ị ga-etekwara m onye m ga-egosi gị mmanụ.”+ 4 Samuel wee mee ihe Jehova kwuru. Mgbe ọ bịarutere Betlehem,+ ndị okenye obodo ahụ malitere ịma jijiji+ mgbe ha zutere ya, ha wee sị: “Nke a ị bịara, udo ọ̀ dịkwa?”+ 5 O wee sị: “Udo dị. Abịara m ịchụrụ Jehova àjà. Doonụ onwe unu nsọ,+ unu ga-esokwa m jee n’ebe ahụ a ga-achụ àjà.” O wee doo Jesi na ụmụ ya ndị ikom nsọ wee kpọọ ha ka ha bịa n’ebe ahụ a ga-achụ àjà. 6 O wee ruo na mgbe ha batara o wee hụ Elayab,+ ọ sịrị ozugbo ahụ: “N’ezie, onye Jehova tere mmanụ guzo n’ihu ya.” 7 Ma Jehova sịrị Samuel: “Elela anya n’ọdịdị ya na ogo ya,+ n’ihi na ajụwo m ya. N’ihi na ọ bụghị otú mmadụ si ahụ ihe ka Chineke si ahụ,+ n’ihi na mmadụ na-ahụ ihe anya na-ahụ;+ ma Jehova na-ahụ ihe dị n’obi.”+ 8 Jesi wee kpọọ Abinadab,+ meekwa ka ọ gafere n’ihu Samuel, ma ọ sịrị: “Ọ bụghịkwa onye a ka Jehova họọrọ.” 9 Jesi mekwara ka Shama+ gafere, ma ọ sịrị: “Ọ bụghịkwa onye a ka Jehova họọrọ.” 10 Jesi wee mee ka mmadụ asaa n’ime ụmụ ya ndị ikom gafere n’ihu Samuel; ma Samuel sịrị Jesi: “Ọ bụghị ndị a ka Jehova họọrọ.” 11 N’ikpeazụ, Samuel sịrị Jesi: “Ọ̀ gwụla ndị a bụ ụmụ gị ndị ikom?” O wee sị: “Onye fọrọ ugbu a bụ nke ọdụdụ,+ lee! ọ na-azụ atụrụ.”+ Samuel wee sị Jesi: “Zie ozi ka a gaa kpọta ya, n’ihi na anyị agaghị anọdụ ala rie nri ruo mgbe ọ bịara n’ebe a.” 12 O wee zie ozi, e wee gaa kpọta ya. Ọ na-acha ọbara ọbara,+ bụrụ nwa okorobịa anya ya mara mma, nke makwara mma ile anya. Jehova wee sị: “Bilie, tee ya mmanụ, n’ihi na ọ bụ onye a!”+ 13 Samuel wee were mpi mmanụ+ ahụ tee ya mmanụ n’etiti ụmụnne ya. Mmụọ Jehova wee malite ịkpa ike n’ahụ́ Devid malite n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu.+ E mesịa, Samuel biliri laa Rema.+ 14 Mmụọ Jehova wee hapụ+ Sọl, mmụọ na-adịghị mma+ nke si n’ebe Jehova nọ menyewere ya ụjọ. 15 Ndị na-ejere Sọl ozi wee malite ịsị ya: “Lee, mmụọ na-adịghị mma nke Chineke na-emenye gị ụjọ. 16 Biko, onyenwe anyị nye ndị na-ejere gị ozi bụ́ ndị guzo n’ihu gị iwu ka ha chọọ nwoke bụ́ ọkà+ n’ịkpọ ụbọ akwara.+ Ọ ga-erukwa na mgbe mmụọ na-adịghị mma nke Chineke dakwasịrị gị, ọ ga-eji aka ya kpọọ ụbọ, ahụ́ ga-adịkwa gị mma.” 17 Sọl wee gwa ndị na-ejere ya ozi, sị: “Biko, chọtaranụ m nwoke na-akpọ ụbọ nke ọma, kpọtakwaranụ m ya.”+ 18 Otu n’ime ndị na-ejere ya ozi wee zaa, sị: “Lee! Ahụwo m otú nwa Jesi onye Betlehem si bụrụ ọkà n’ịkpọ ụbọ,+ ọ bụ nwoke dị ike nke bụ́ dimkpa,+ bụrụkwa dike n’agha,+ ọ bụ ọkà okwu maara ihe+ na nwoke mara mma,+ Jehova nọnyekwaara ya.”+ 19 Sọl wee zigara Jesi ndị ozi, sị: “Biko, zitere m Devid nwa gị, onye na-elekọta ìgwè ewu na atụrụ.”+ 20 Jesi wee kpụrụ otu ịnyịnya ibu, were achịcha na otu karama akpụkpọ+ mmanya, kpụrụkwa nwa ewu wee zigara ha Sọl site n’aka nwa ya Devid.+ 21 Otú a ka Devid si bịa n’ụlọ Sọl wee na-ejere ya ozi;+ o wee hụ ya n’anya nke ukwuu, o wee ghọọ onye na-eburu ya ihe agha.+ 22 N’ihi ya, Sọl zigaara Jesi ozi, sị: “Biko, ka Devid nọrọ na-ejere m ozi, n’ihi na ihe ya masịrị m.” 23 O wee ruo na mgbe mmụọ Chineke dakwasịrị Sọl, Devid na-ewere ụbọ akwara, jiri aka ya kpọọ ya; ahụ́ na-adajụ Sọl, ahụ́ na-adịkwa ya mma, mmụọ ahụ na-adịghị mma na-esikwa n’ahụ́ ya pụọ.+